Nkwụnye Forex | Depositzọ nkwụnye ego kacha mma nke Forex, Jiri FXCC were akaụntụ gị ugbu a
Nkwụnye ego / nchụpụ
Oge nhazi *
GBP Ego ugbu a
Max (Per Kaadị) - Daily $ 5,000 -Weekly $ 20,000
Max ruo ego mbụ a kwụrụ ụgwọ
5-7 na-arụ ọrụ
Ụbọchị iji kpochapụ 5-7
ụgwọ USD Ego ugbu a
Max Ogoghi oke
site CNY) Ego ugbu a
Max Ọnụ ego bank kaadị ndị ahịa
min ¥ 100 kwa mbufe
Max ¥ 100000 kwa mbufe
Max Adreesị njikwa akaụntụ nke onye ahịa
1 hour 7 na-arụ ọrụ
ụbọchị iji kpochapụ zero
2-5 na-arụ ọrụ
ụbọchị iji kpochapụ 7 na-arụ ọrụ
1-2 na-arụ ọrụ
-ete Ego ugbu a
min 10 ete
Max 600,000 ete
Max 500,000 RUB site na azụmahịa
FXCC ** EUR, GBP Ego ugbu a
* Na-edozi Mgbe ị na-arụ ọrụ azụmaahịa nkịtị
Dị ka akụkụ nke nraranye anyị na-aga n'ihu maka ndị ahịa anyị, anyị na-enye nkwalite “ụgwọ nkwụnye ego efu”! Nke a pụtara na FXCC ga-akwụ ụgwọ zuru oke ma ọ bụ akụkụ nke nkwụnye ego nke onye na-akwụ ụgwọ kwụrụ ụgwọ mgbe ị na-etinye anyị ego site na usoro ịkwụ ụgwọ ọ bụla nke FXCC.
Oke ego nke nkwụnye ego FXCC kpuchitere bụ otu narị mkpụrụ ego sitere na ngụkọta ego nkwụnye ego nke PSP nyere onye ahịa ọ bụla.
FXCC ga-eweghachi iche ego nke usoro azụmahịa maka nkwụnye ego ejiri kwado ụzọ nkwụnye ụgwọ FXCC.
FXCC nwere ikike iwepu ego ezugharịrị na mgbagha maka arịrịọ ndọrọ ego ezughi oke ma ọ bụ na-azụghị ahịa azụmaahịa ọ bụla.
A ghaghị ịgbanwere oke ego na ego a na-atụ anya na ọnụego mgbanwe kwa ụbọchị
Nbanye & Jụọ Akaụntụ Gị na ụgwọ ZERO
Dị ka akụkụ nke nraranye anyị na-aga n'ihu maka ndị ahịa anyị, anyị na-enye nkwalite "ego nkwụnye ego efu"!
Ndi Edebeghị Aha? Gbanwee ugbu a
FXCC Ụlọ Ọrụ Ụlọ Ọrụ
Ọnụ ego na ego nkwụnye ego ga-atụle iche iche n'ime akaụntụ ahịa gị
A ga-ezigara akwụkwọ nzaghachi n'otu ụzọ ahụ e si enweta ego ahụ ma ruo nkwụnye ego mbụ. A ga-ewepu ego site n'iji Bank Transfer Transfer
Onu ogugu kacha nta nke ụlọ ọrụ a bụ $ 50 ọ gwụla ma ọ bụrụ na edeghị ya na tebụl n'elu
Nkwụnye ego dị ntakịrị bụ maka nhazi nhazi. Ihe nkwụnye mbụ nke FXCC ga-atụle bụ ụdị akaụntụ achọrọ dị ntakịrị
Maka ụzọ ọzọ ịkwụ ụgwọ, FXCC anaghị etinye ego kachasị elu. Maka ajụjụ ọ bụla, a ga-enyocha ya na onye na-eweta usoro ịkwụ ụgwọ
nkwụghachi iwu: Nkwụnye ego nile na akaụntụ ndị ahịa na-ewere na ọ bụ nke ikpeazụ ma ọ bụghị akwụghachi ụgwọ. A ghaghị ime ihe ọ bụla site na iji usoro nkwụsị nke FXCC Finance Department. Ọ bụrụ na ebe FXCC jụrụ ego ma ọ bụ na ikpe nkịtị, a ga-akwụghachi ụgwọ site na arịrịọ sitere na nzukọ Credit / Debit Card, na Ebe E Si Nweta / Debit nke e ji etinye ego ahụ.